Yakachipa Aluminium alloy radiator yakadururwa zvikamu fekitori uye vatengesi | Ouzhan
Yakasarudzika aruminiyamu chiwanikwa radiator chimiro extrusion
Ukobvu hwemufirimu uyu hunenge 1μm, iyo yakafanana neiyo substrate. Icho chisungo chakasimba kwazvo, chinoita kuti pamusoro pekupfeka pasike uye kudzivirira iyo yega-oxidation kubva kuenderera. Naizvozvo, aruminiyamu chiwanikwa pachayo haityi okisijeni, uye hapana okisijeni ngura.
Iyo aluminium alloy ine dense aluminium oxide inodzivirira firimu pamusoro, saka zvinonetsa kuti anti-corrosion coating inamate. Kunyangwe ikaiswa, iyo anti-corrosion coating block pane yemukati peari yealuminium alloy iri nyore kudonha pasi pekushambidzwa kwemvura mukati meiyo radiator. Naizvozvo, aluminium alloy radiator haifanire kushandiswa mukati mekupisa sisitimu, asi iwo anokodzera kwazvo kuzvidzora-kupisa masystem.
Aluminium alloy radiator maficha: nekuda kweakanakisa kupisa kupisa kwealuminium alloy, yemukati inorwisa-ngura musimboti weiyo radiator
Iyo yemukati inorwisa-ngura kurapwa kweiyo radiator ndeyekufukidza iyo yemukati peiyo radiator nechero rekunamatira kwakanaka (adhesion) uye ngura kuramba Iyo organic pendi inodzivirira mvura kubva kune iyo simbi kana aluminium, nokudaro ichitamba chinzvimbo mukudzivirira ngura.
Yakasarudzika aruminiyamu chiwanikwa radiator chimiro extrusion ruzivo
Mashoko Aluminium chiwanikwa
Pashure: 6016 aruminiyamu chiwanikwa kupisa kurapwa CNC machine zvikamu
Zvadaro: Anodized aluminium alloy machining zvikamu